Anthony Martial oo ka yaabsaday tababare Solskjær kahor inta uusan bilaaban xilli ciyaareedka cusub – Gool FM
Anthony Martial oo ka yaabsaday tababare Solskjær kahor inta uusan bilaaban xilli ciyaareedka cusub
(Manchester) 20 Luulyo 2019. Macalinka kooxda Manchester United ee Ole Gunnar Solskjær ayaa muujiyay sida uu ula dhacsan yahay shaqada uu hada ka haayo Anthony Martial diyaar garoowga ay ugu jiraan xili ciyaareedka cusub.
Tababare Ole Gunnar Solskjær ayaa wareysi uu ku bixiyay shabakada caanka ah ee “Sky Sports” wuxuu ku sheegay:
“Anthony Martial wuxuu noqon karaa weeraryahan heer caalami ah”.
“Waxaan la socday xili ciyaareedyadii dhawaa ee lasoo dhaafay, laakiin qaabka uu dib ugu soo laabtay tababarka kahor inta uusan bilaabanin xilli ciyaareedka cusub, waxay u muuqataa mid aad u fiican”.
“Wuxuu leeyahay awood farsamo oo heer sare ah, iyo tayo heer sare leh, wuxuuna dhaliyaa goolal, wuxuu muujinayaa heer gabi ahaanba ka duwan sidii hore”.
“Waxaan filayaa in isaga iyo Marcus Rashford ay noqdaan kuwo ka fiican sida ay ahaayeen xili ciyaareedkii hore”.
“Dabcan, Anthony Martial wuxuu ka mid ahaa ciyaartoydii ugu fiicnayd xilli ciyaareedkiisii ​​ugu horeysay ee halkan, wuxuuna ahaa gooldhaliye aad u fiican, kaddib waxaa ku yimid hoos u dhac mudo 2 xili ciyaareed ah, waxaana sidoo kale hoos u dhacday gooldhalintiisa, lakiin waan hubaa inuu fiicanaan doono xilli ciyaareedka cusub”.
“Hazard wuxuu u baahnaa kooxda sida Real Madrid oo kale ah” - Zinedine Zidane
Diego Simeone oo afka furtay kaddib heshiiskii uu Antoine Griezmann ugu biiray kooxda Barcelona